Dowlada talyaaniga oo sheegtay in ay la shaqaynayso Hay'adaha Amaanka Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowlada talyaaniga oo sheegtay in ay la shaqaynayso Hay’adaha Amaanka Soomaaliya
Muqdisho (KON) Dowladda Talyaaniga ayaa si kulul u dhaleeceysay Qaraxii Shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya kaasi oo galaaftay nolosha dad gaaraya 10-ruux halka tiro intaasi ka badan dhaawacyo ay ka soo gaareen.
Wasiirka arrimaha Dibadda Talyaaniga Gulio Terssi oo Hadal soo saaray ayaa wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay qaraxii shalay dhacay kaasi uu ku tilmaamay mid dhibaato u keenaya Nabada ka bidhaantay dalka,gaar ahaan Muqdisho.
Wasiirka ayaa xusay in dalkiisu uu si wayn uga soo horjeedo una cambaareynayo fal kasta oo Nabadgaliyada Soomaaliya wax u dhimaya.
Wuxuu hoosta ka xariiqay wasiirka arimaha dibada Talyaaniga in weerarada ceynkaani oo kala ah inta badan lagu yaqaano sida uu sheegay Kooxda Ururka ka soo horjeeda dowlada Soomaaliya.
Sidoo kale Gulio Terssi ayaa tacsi u diray dhamaan Ehalada dadkooda waxyeelada ka soo gaartay,isagoona balan qaaday in si looga hortago falalkaan ku soo noq noqday Muqdisho si ballaaran ula shaqeyn doonaan Laamaha amaanka ee dowlada Soomaaliya.
Warka ka soo baxay wasaarada arimaha dibada Talyaaniga ayaa imaanaya xilli Maalintii shalay Muqdisho gilgilay Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac,kaasi oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Alshabab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda Qaraxaas oo ahaa mid lala beegsanayay Taliyaha Nabad-Sugidda Gobalka Banadir Khaliif Ereg, kaasi oo isaga qudhiisa dhaawac noqday.